दु:खद खबर ! को’रोना परीक्षण सामग्री बोकेको विमान दु’र्घ’टना, पाइलटको मृ’त्यु – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/दु:खद खबर ! को’रोना परीक्षण सामग्री बोकेको विमान दु’र्घ’टना, पाइलटको मृ’त्यु
दु:खद खबर ! को’रोना परीक्षण सामग्री बोकेको विमान दु’र्घ’टना, पाइलटको मृ’त्यु
एजेन्सी। को’रोना भा’इरस ‘कोभिड १९’ परीक्षण सामग्री बोकेको विमान दुर्घ’टनामा पर्दा एक अमेरिकी महिला पाइलटको मृ’त्यु भएको छ। इन्डोनेसियाको ग्रामिण क्षेत्रमा को’रोना परीक्षण किट बोकेर उडेको विमान मंगलबार बिहानै दु’र्घट’नामा परेको थियो। ४० वर्षकी अमेरिकी पाइलट जोइस लिनको मृ’त्यु भएको सीएनएनले जनाएको छ। लिन दुई वर्षदेखि इन्डोनेसियामा कार्यरत थिइन्। इन्डोनेसियामा हालसमम १६ हजारमा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ।
हालैका दिनमा इन्डोनेसियामा को’रोना ति’व्र रुपमा बिढिरहेको जनाइएको छ।
कोरोनाका कारण ऐश्वर्या राय र छोरी आराध्या पनि अस्पताल भर्ना
बल्ल बोल्यो चीन, चीनको जवाफ सुनेर तर्सियो भारत